Ogaden News Agency (ONA) – Shil Baabuur oo Ka Dhacay Kenya oo Khasaare Gaystay.
Shil Baabuur oo Ka Dhacay Kenya oo Khasaare Gaystay.
Posted by Dayr	/ January 1, 2018
Ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhimatay shil gaadhi oo ka dhacay gudaha dalka Kenya. Shilkan ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen labo baabuur oo bas rakaab siday iyo gaadhi xamuul ah. Shilkan ayaa ka dhacay wado wayn oo ku taala galbeedka dalka Kenya, taasi oo isku xidha magaalooyinka Eldoret iyo Nakuru.
Wadooyinka Kenya ayaa inta badan khatarta ay ku badan tahay xiliyadan oo kale oo ah dhammaadka sanadka, maadaama inta badan shacabka ay u dalxiis tagaan Gobolada dalka taasi oo keenta in darawalada gaadiidka ay si xowli ah u ka xeeyaan gawaadhida.
18 qof oo ku dhaawacmay shilkan ayaa la geeyay xarumaha caafimaadka dalka kenya. Goob u jirto seddex kilo mitir halka shilku uu ka dhacay ayaa horey waxaa uga dhacay shil baabuur, kaasoo ay ku dhinteen 20 qof bilowgii bishan December 2017.
Dowlada Kenya ayaa kudhawaaqday sharci cusub oo gaadiidka waawayn ka mabnuucaya in ay xiliyada habeenkii ah guuraan, waxayna dowladu sheegtay in wixii hada kadambeeya baabuurta loo ogolaandoono oo kaliya 6:00am ilaa 7:00pm.